Ngaba Sifanele Simbuze UThixo?
BAMBI bathi kuphosakele ukubuza uThixo. Banokuvakalelwa kukuba kukungabi nantlonelo ukubuza uThixo ngezinto ezithile azenzayo nangezo angazivumeliyo ukuba zenzeke. Ngaba nawe unaloo mbono?
Ukuba kunjalo, usenokothuka kukufumanisa ukuba abantu abaninzi abalungileyo baye bambuza uThixo. Apha ngezantsi sinoludwe lwemibuzo abaye bambuza yona:
Indoda ethembekileyo uYobhi yabuza: “Kutheni abangendawo beqhubeka bephila, besiba badala, besongama nangendyebo?”—Yobhi 21:7.
Umprofeti othembekileyo uHabhakuki wabuza oku: “Kutheni na ukhangela abo benza ngobuqhophololo, uqhubeka uthe cwaka xa ongendawo eginya olilungisa ngaphezu kwakhe?”—Habhakuki 1:13.
UYesu Kristu yena wabuza wathi: “Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?”—Mateyu 27:46.
Ukuba ufunda iivesi ezihamba nezi zicatshuliweyo, ayikho into ebonisa ukuba uYehova * uThixo wacaphuka xa ebuzwa loo mibuzo. Ngokwenene, uThixo wayenomonde. Ngokomzekelo, uThixo akakhathazeki xa simcela ukuba anelise iintswelo zethu. Uyakuvuyela ukusinceda. (Mateyu 6:11, 33) Ngendlela efanayo, usinika ulwazi olusinceda ngokwasengqondweni nangokweemvakalelo. (Filipi 4:6, 7) Kangangokuba uYesu wathi kubafundi bakhe: “Qhubekani nicela, niya kunikwa.” (Mateyu 7:7) Umongo wale ncoko kaYesu ubonisa ukuba wayengathethi ngokuncedwa ngezinto zobomi kodwa wayekwabhekisela nakwiimpendulo zemibuzo ebalulekileyo.
Ukuba ubunokufumana ithuba, nguwuphi kule mibuzo ilandelayo obunokuwubuza uThixo?
Kutheni undivumela ndibandezeleke?
Ekubeni “sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo,” iimpendulo uza kuzifumana eLizwini lakhe, iBhayibhile. (2 Timoti 3:16) Khawuve izizathu zokuba abanye beye babuza le mibuzo ingasentla nendlela iBhayibhile eyiphendula ngayo.
^ isiqe. 7 UYehova ligama likaThixo eliseBhayibhileni.